Umthandazo weChauffeur Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Abaqhubi, ngaphambi kokudibana neendlela ezinde, apho kufuneka bahambe khona amacandelo anzima kakhulu, bazenzele Umthandazo womqhubi kumqeshi wakhe KwiSan Cristobal.
Umfanekiso weSan Cristóbal
1 UChristopher oyiNgcwele, ukukhuthazwa komthandazo womqhubi
2 Imithandazo eya kuChristopher Ongcwele
2.1 Umthandazo womqhubi
2.2 Umthandazo kuChristopher Ongcwele, malunga nohambo oluhle
2.3 Umthandazo kuChristopher oyingcwele, ukukhusela uhambo
2.4 Umthandazo kuSan Cristóbal, wokuvuma iphepha-mvume lokuqhuba.
3 Ngaba uSanta Christopher wayengcwele?
UChristopher oyiNgcwele, ukukhuthazwa komthandazo womqhubi
UChristopher oyiNgcwele, nangona engenguye osikelelekileyo ozinikeleyo kwiCawa yamaKatolika, uhlonitshwa kakhulu ngabahambi nabaqhubi. Kuba igama lakhe lithetha "umphathi kaKristu." Amaqela abo abhiyozelwa nge-10 kaJulayi.
Kuthiwa wayeyindoda eyomeleleyo, eyomeleleyo, ende, enentshebe, nendoda ephakathi. Oko kwajikeleza el mundo ukukhangela oyena kumkani unamandla kwaye unamandla okumkhonza. Wazalelwa eKanan phantsi kwegama likaOffero.
Ngokuyintloko, wayekhonza uKumkani wengingqi yakhe, kodwa wathi akuqonda ukuba uKumkani wakhe wangcangcazela xa kuthethwa ngo "Mtyholi" waqonda ukuba wayengenguye uKumkani owomeleleyo, kwaye kulapho waqalisa uhambo lokukhangela loo nto. Kumkani onamandla.
Ngethuba lokuhamba kwakhe, wahlangana neqela lamasela awaqala ukuwakhonza, inkokeli yawo izibiza "nguDiablo." Kodwa wathi akufumana iChristian Cross, waziva esoyika, kwaye uChristopher oyiNgcwele waqonda ukuba kukho umntu onamandla ngaphezu kuka "Mtyholi."
Imbali ithi kolunye uhambo lwakhe wadibana nendlwana emqolombeni, eyathi yamxelela ngoKrestu namandla akhe. Ucebise ukuba enze imisebenzi yokukholisa iNkosi yethu. Ke wathembisa ukusebenza emlanjeni enceda abantu ukuba bawele.
Kwakhona, ngenye imini kwafika umntwana wamcela ukuba amncede anqumle, awamkela. Umlambo kunye nemisinga yayinamandla kakhulu. Wambamba umntwana ngezandla zakhe wamphakamisela emagxeni, embindini weva ukuba umntwana uyasinda.
Ke ngoko, wathi akufika kwelinye icala lomlambo, wamhlisa umntwana emagxeni akhe, waqonda ukuba uguqukile waba nguKrestu. Into eyamxelela ukuba yabanzima okoko ithwele ubunzima behlabathi.
Kwakhona, kuthiwa wabhaptizwa nguKristu emanzini omlambo kwaye wamngcwalisa njengoChristopher oyiNgcwele, oku kuthetha "umphathi kaKristu."
Le yindlela uSan Cristóbal athunywa ngayo ukuba abalise ibali lakhe, enika ubungqina bokholo kunye nokushumayela amawaka, ekwazi ukuguqula abantu abaninzi babe ngamaKristu. Eli nyathelo lacaphukisa umphathi wommandla, uDagnus de Samos, eLycia, owayalela ukuba avalelwe aze kamva anqunyulwe intloko.
Kwangokunjalo, kwaba yinto edumileyo kwiminyaka emininzi emva kokubhubha kwakhe, malunga nenkulungwane ye-XNUMX, kwizindlu zoonongendi nasezicaweni igama lakhe laqala ukuthandwa. Siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku Umthandazo wokuthoba kunye nokuqinisekisa umntu
Intsingiselo yemedali eyiChristopher
Kwimedali kubonakala umfanekiso kaChristopher ephethe uYesu omncinci emagxeni akhe kwimisinga engenakuphumla, ngegama elithi "uChristopher oyiNgcwele uyasikhusela." Le mbasa isetyenziselwa ukucela intsikelelo kunye nokukhuselwa kwabo, ngexesha lohambo olude kunye nohambo, ukongeza ekunxibeni kwabo kujinga kwizithuthi zabo ukukhusela kwiingozi xa behamba ngendlela.
Imithandazo eya kuChristopher Ongcwele
Emva koko, siza kubonisa eminye imithandazo ethandazelwa kuChristopher oyiNgcwele, ngakumbi Umthandazo womqhubi.
Ndinike, Nkosi, isandla esomeleleyo kunye neliso elibukhali ukuze kwinyathelo lam ndingonzakalisi mntu.
Kuwe Nkosi onika ubomi kwaye ubugcina, ndicela ngokuthobekileyo, gcina owam namhlanje ngalo lonke ixesha.
Nkosi yeLibra, kwabo bandikhapha, kubo bonke ububi: ukothuka, ukugula, umlilo okanye ingozi.
Ndifundise ukusebenzisa imoto yam, ukulungisa iimfuno zabanye.
Okokugqibela, Nkosi, ungavumeli i-vertigo yesantya inditsalele kude, kwaye, uncoma ubuhle beli hlabathi
Ndikwazile ukuqhubeka nokugqiba indlela yam ngolonwabo lonke.
Ndiyakucela, Nkosi, ngokulunga kunye nokuthethelela kukaChristopher oyiNgcwele, uMxhasi wethu oMkhulu.
Sithandaza oobawo bethu abathathu nozuko.
Umthandazo kuChristopher Ongcwele, malunga nohambo oluhle
Ngalo lonke ixesha ndiqhuba, Nkosi, ndingaziva izandla zaKho zikum.
Ndinike iliso elinononophelo nelinononophelo, kulutsha nakwabadala, xa ndidlula.
Iyamthintela ekukhawuleziseni ngokungeyomfuneko, ekuhambeni ngobuhle bomhlaba ngaphandle kokuhoya.
Ndifuna ukukusebenzisela le moto, ukuqhuba nabahlobo bam ngokukhuselekileyo.
Kodwa zonke ezi zinto azinakuze zibekho, ngaphandle kokuba, Nkosi, uqhube nam.
Umthandazo kuChristopher oyingcwele, ukukhusela uhambo
UChristopher othandekayo, ndikhusele namhlanje kuko konke ukuhamba kwam endleleni.
Nika umqondiso wakho wesilumkiso ukuba ingozi ikufuphi ukuze ndiyeke ngelixa indlela icacile.
Yiya kwifestile yam kwaye undikhokele kuyo xa umbono ungabonakali ndawo.
Ndise ngokukhuselekileyo apho ndiya khona, njengoko wamwisayo uKristu esondweni lwakho.
Umthandazo kuSan Cristóbal, wokuvuma iphepha-mvume lokuqhuba.
UChristopher oNgcwele ozukileyo, uzuze njengelifa igama elihle, uChristopher, ngenxa yentsomi yokuba ngelixa ukhokela abantu ukuwela umlambo onomsindo, ubuphethe noMntwana onguYesu.
Sifundise ukuba ngabathwali bakaKristu bokwenene kwabo bangamaziyo.
Khusela sonke thina abahamba kufutshane nakude kwaye sicele uYesu ukuba abe nathi rhoqo.
Ngaba uSanta Christopher wayengcwele?
Nangona engakhange azukiswe yiCawa yamaKatolika, uthathwa ngokuba ungcwele. Unabalandeli abathembekileyo ukusukela kwimbali yakhe esithi wayephethe ukuhambisa abahambi ezantsi emlanjeni. Ukugqitha ngomlomo ngokuhamba kwexesha.
Ungumgcini wabantwana, abahambi nabaqhubi. Umthendeleko wakhe ubhiyozelwa nge-10 kaJulayi, nangona ungenawo umhla wokubekwa, unomhla wokubhiyozela apho abo bazinikele kuye banokumnqula.
Ngendlela efanayo, apha sishiya ividiyo yomthandazo othi SITHANDAZELE ESAN CRISTÓBAL YOKUKHUSELWA KWABAQHUBI ENDLELENI - UMTHANDAZO NOXOLO.